Ndepụta ịwụ mmanya na ihe ọ drinkụ drinkụ kacha mma Co Kildare - IntoKildare
Oge mbu, Nri na Ṅụọ
Kildare aghọọla ite na-atọ ụtọ nke ihe ụtọ na nhọrọ, yana mgbawa nke ụlọ oriri na ọ barsụ andụ na ụlọ mmanya kacha mma.
O doro anya na anyị enweghị ike depụta ha niile ebe a mana anyị nwere ike inye gị naanị ole na ole ka ị wepu ndepụta ịwụ gị!
Ma ọ bụ ofe na ụdị Sanwichi nri ehihie ma ọ bụ iko tii nwere ụfọdụ nri na nkata, Ọkụ ọkụ na Kildare ekpuchiela gị! Anyị na -akwado nke ukwuu ịgbakwunye ọkwá Poké na -atọ ụtọ na ndepụta ịwụ nri gị na Kildare. Ha na -ekwe nkwa ozugbo ịnwale ya, ị ga -alọta ọzọ ma anyị jiri obi anyị niile kwere!
Anyị enweghị ike ịme ndepụta ịwụ na ihe ọ drinkụ drinkụ kacha mma ma etinyeghị ya Auld Shebeen na Athy. Olee otú ihe ndị a si enye ume ọhụrụ? Ha na -atọ ụtọ karịa ka ejikọtara ya na Pizza ejiri aka mee ma ọ bụ nku ọkụ ọkụ a ma ama, Auld Shebeen nwere ihe niile ịchọrọ maka nri zuru oke.
Biputere Fallons nke Kilcullen (@fallonsofkilcullen)
Nke a bụ otu maka ndị hụrụ chiiz n'anya! Fallons, Onye isi Kildare Michelin tụrụ aro ahụmịhe nri agbakwunyerela nri a mara mma nke Burrata na sundrop na tomato heirloom na menu nri ehihie Sọnde ha. Fallons abụghị naanị nwere ụlọ oriri na ọulousụ butụ mara mma kamakwa ọ nwere nnukwu ụlọ mmanya na ebe a na -anọdụ ala.
Ụlọ nri abụọ na mmanya mmanya
Biputere nke abụọCooks (@twocooks_sallins)
Izu oke nri na Sallins nke otu di na nwunye pụtara juru afọ abụọ! Oge iwu n'oge ụlọ oriri a na -ekpebi akwụkwọ nri na efere na menu, nke dị iche site na azụ ọhụrụ na nhọrọ ndị anaghị eri anụ, ha niile ejirila ọ ofụ servedụ na -eje ozi.
Mkpọchi 13 Brew Pub
Omuma zuru oke, Mkpọchi 13 Skin Potato Crispy nke agbakwunyere Dubliner Red Cheddar gbazere, anụ ezi Irish siri ike, eyịm mmiri ma tinye ya na obere ahịhịa chilli dị ụtọ ga -eme ya na ndepụta ịwụ na ihe ọ drinkụ drinkụ nke Kildare. Dị na Sallins, Lock 13 Brew Pub bụ ụlọ ọrụ Kildare Brewing Company. Kedu ihe kpatara na ị gaghị ejikọ nri ụtọ ha na otu Pale Ales, IPA ma ọ bụ Lagers ha? Site na mpaghara iri nri dị ịtụnanya n'èzí, njegharị ebe a na -eme ebe a na -atọ ụtọ na ọ bụ ahụmịhe nke a na -agaghị agbaghara!
Biputere AIMSIR (@aimsir_restaurant)
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Michelin Star 2 a dị na gburugburu mara mma nke Cliff na Lyons na Celbridge. Onye di na nwunye nwere nkà, Jordan na Majken Bech Bailey duo. Aimsir Enyere Michelin Stars ha naanị ọnwa anọ ka emepegharịrị. Site na ahụmịhe dị iche iche dị, ị nwere nhọrọ ịhọrọ nke ga-adabara gị na mmasị gị kacha mma. Anyị na-ekwe nkwa na ọ bụ ahụmahụ na-agaghị echefu echefu.
Biputere nke Cunninghams Bar & Rooms kesara (@cunninghams_bar)
Gaa niile wee rie nri na okomoko na The Dining Room na Cunningham's. Ihe oriri mara mma juputara na nri Thai na-atọ ụtọ yana ụfọdụ oge ochie nke Europe. Emela ka anyị malite na mmanya mmanya! Ụlọ iri nri na Cunningham's bụ ahụmahụ agaghị echefu maka nri niile nọ n'ebe ahụ.
Bipute nke Achịcha & Beer kesara (@breadandbeer11)
Tọọ na Mone High Cross Inn dị afọ 200. Achịcha na biya bụ a culinary nrọ . Ntọala kacha mma jikọtara ya na nnukwu menu yana ụfọdụ nhọrọ ndị anaghị eri anụ mara mma. Anyị na-akwado Risotto kọlịflawa ha maka nri veggie dị ụtọ!
Ozi nke Cooke's nke Caragh kesara (@cookesofcaragh1860)
Ọ bụrụ na nri mmiri bụ ihe gị, anyị nwere naanị ebe maka gị. Site na prawn ruo chowder ruo salmon Isi nri nke Caragh emela ihe site na ọkara. Rie nri nkịtị na Gastro Longue tupu ị nweta otu iko mmanya na Cooke's Bar ma ọ bụ The Beer Park na mgbede okpomọkụ na-ekpo ọkụ.
Mbipụta nke Edward Harrigan & Sons (@harrigansnewbridge) kesara
Aperol Sour ọ bụla? A bịa na cocktails, ọ dị mma ịsị Edward Harrigan na Sons bụ ndị ọkachamara na ọrụ ha. Nri ha bụ ọkacha mmasị siri ike n'etiti ndị bi na Kildare ka ha na-eji ihe kacha mma nke Irish mpaghara mepụta menu mara mma dabara maka ezinaụlọ, azụmaahịa, mmemme nkịtị, mmemme pụrụ iche na nnọkọ nzuzo.
Oge mbuNri na Ṅụọ